Valopolo taona taty aoriana, mbola mifampitsara an-tendrony ny Jordaniana sy ny Palestiniana · Global Voices teny Malagasy
Valopolo taona taty aoriana, mbola mifampitsara an-tendrony ny Jordaniana sy ny Palestiniana
Voadika ny 29 Mey 2018 10:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Swahili, عربي, русский, polski, English
Lehilahy manao Kofeyeh (saron-doha nentim-paharazana Palestiniana) miresaka amin'ny lehilahy iray manao Shmagh (saron-doha nentim-paharazana Jordaniana). Sary azon'ny daholobe ampiasaina, avy amin'ny: Garaa News.
Eo amin'ny 70 % n'ny mponina ao Jordania no fiaviana Palestiniana, ary mifandray tsara amin'ny ankapobeny ao anatin'ny fiarahamonina Jordaniana izy ireo. Niara-nipetraka ny Jordaniana sy ny Palestiniana hatramin'ny ady Arabo-Israely tamin'ny taona 1948 sy ny Nakba Palestiniana, ary efa taloha ela be mihitsy aza.
Na izany aza, rehefa miresaka amin'ireo Palestiniana sy Jordaniana andavanandro ianao dia mahita tantara izay miresaka momba ny fifandirana misy eo amin'ny roa tonta.
Sara Suod, avy ao Madaba, Jordania afovoany, nilaza tamin'ny Global Voices fa tsy mamela azy hitsidika ireo Palestiniana namany ny ray aman-dreniny:
“Avy any Madaba aho, ary tena mirehareha amin'izany [maha-Jordaniana] ny fianakaviako. Tena mirehareha ka tsy avelan'izy ireo hitsidika ireo Palestiniana namanay any an-tranon'izy ireo amin'ny maha-zaza izaho sy ny rahavaviko.
Raha niteraka fahatsapana fandriampahalemana eo amin'ny vahoaka roa tonta ny fiaraha-miaina nandritra ny fotoana, dia tsy mbola misy ny firindrana tanteraka. Ny fanambadiana sy ny fanatanjahan-tena no roa amin'ireo sehatra izay mbola ahafahantsika mahita mazava kokoa ireo fihenjanana.
Mbola fady ve ny fifanambadiana Jordaniana-Palestiniana?
Amin'ireo vehivavy Jordaniana 82.000 manambady vahiny, efa ho 53.000 no manambady Palestiniana. Tarehimarika ambony kokoa azo alaina mba hanehoana ny maha zava-tsotra ny fifanambadian'ny Jordaniana-Palestiniana any Jordania, saingy mety handiso hevitra izany isa izany.
Mampiseho sary hafa momba ny fiarahamonina Jordaniana mikasika ireo fanambadiana ireo ny tantaran'ireo olom-pirenena Jordaniana (na Jordaniana na Palestiniana fiaviana). Na dia tsy ny fady loatra aza ny fanambadiana, dia mety ho fady- arakaraka ny faritra sy ny fianakaviana – mety ho tsy maninona, mahasadaikatra na voaràra tanteraka.
Atomboka amin'ny tantaran'ny fianakaviana izay milamina manoloana ny lohahevitra, ity ny tantaran'i Ahmad Khalil, lehilahy palestiniana, sy ny vadiny Jordaniana. Satria nahomby ny fanambadian'izy ireo, nilaza tamin'ny Global Voices izy fa:
Nihaona tany amin'ny oniversite taona voalohany izahay ary nifamofo rehefa vita ny fianaranay. Fantatry ny fianakaviany hatrany am-piandohana ny momba anay, ary toy izany koa ny fianakaviako. Tsy nisy nanohitra na inona na inona, ary nandeha tsara ny zava-drehetra nandritra ny fifamofoana. Ankoatra ny disadisa mahazatra sy mandalo teo amin'ny fianakavian'ny vady, dia tsy nisy ny olana goavana. Ary koa tsy mba resaka fanavakavaham-bolokoditra velively ny disadisa. Mieritreritra aho fa noho ny reniko Jordaniana no mahatonga izany, ary manambady Palestiniana avokoa ireo dadatoany, noho izany, azo lazaina fa samy zatra izany toe-javatra izany ny fianakavianay.
Manam-bintana i Ahmad sy ny vadiny, ary toy izany koa ireo teraka tao anatin'ny fianakaviana izay mifangaro, satria kely kokoa ny olana momba ny fitsarana an-tendrony na ny fanavakavaham-bolonkoditra satria mizaka ny zom-pirenena roa ny tsirairay.
Na izany aza, tsy ny olon-drehetra no miaina toa an'i Ahmad. Raha niresaka tamin'ny Global voices momba ny hevitry ny fianakaviam-badiny sy ny fianakaviany manokana momba ny nanambadiany Palestiniana, i Sara Majali, vehivavy 26 taona avy any Al-Salt, afovoany andrefan'i Jordana:
Nihalehibe, tsy dia sarotiny loatra momba ireo mpiray tampo amiko sy izaho manambady Palestiniana ny fianakaviako, saingy raha nilaza tamin'izy ireo aza aho fa hanambady Palestiana, dia tsy dia faly loatra momba izany izy ireo. Aleon'izy ireo mahita ahy manambady zanak'olo-mpiray tam-po izay avy any Al-Salt koa, na farafaharatsiny olon-kafa avy amin'izany. Nanohitra ny fanambadiana ny reniko tamin'ny voalohany, nilaza tamiko fa afaka mahita olona ‘manakaiky kokoa anay’ aho, saingy tsy nieritreritra tahaka izany ny dadako.
Nanaiky ny fanambadiana ihany ny reniny nony farany.
Nanaiky ny fanambadiana ihany ny reniko afaka volana maro nandresen-dahatra azy, saingy mbola tsy nanome tso-drano ny mariazy avy amin'ny fony manontolo izy. Rehefa mifamaly izaho sy ny vadiko, ny teny voalohany avy amin'ny vavany dia toy izao foana: “tsy tsara kokoa raha nanambady ianao …?” Ary avy eo nanonona izay anaran-dehilahy teraka tany Salt izy.
Mbola nametraka olana ho an'ny vadiko ny fianakaviany, ​​na dia tsy manohitra ny fanambadianay tahaka ny reniko aza. Matahotra noho izaho avy amin'ny fianakaviana lehibe, zava-misy izay heverin'izy ireo fa hampiasaiko hanoherako ny vadiko izy ireo, ka nanoro hevitra azy mba hitady olona ‘akaiky kokoa’ azy ireo ny fianakaviany. Taorian'ny 3 taonan'ny fanambadiana, nahafantatra ahy tsara kokoa izy ireo, saingy mbola tsapako fa mametraka fetra amin'ny fifandraisako amin'izy ireo ry zareo – tsy toy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny vehivavy Palestinianan'ny zaodahiko, izay nekena avy hatrany sy noraisina ho anatin'ny fianakaviana.
Ny tantaran'i Sara dia maneho hevitra raiki-tapisaka eo amin'ny fiarahamonina Jordaniana hatramin ‘ny fifindra-monina Palestiniana voalohany tany Jordania tamin'ny taona 1948 – Midadasika kokoa ny fianakaviana Jordaniana ary mitady ho manan-kery bebe kokoa, raha “tsy manana hazon-damosina” kosa ny Palestiniana (izay mpifindra monina).
Fiteny fanambaniana ny hoe “tsy misy hazon-damosina” mba hilazana fa tsy midadasika sy/na tsy mahay mifandray tsara tahaka ny Jordaniana ny fianakaviana Palestiniana, izay midika fa lehilahy na vehivavy Jordaniana no mety hifehy kokoa ny fanambadiana satria manana fianakaviana sy hery amin'izany izy ireo.
Izany no mahatonga ireo fianakaviana Palestiniana tsy sahy manambady fianakaviana Jordaniana, na mifamadika amin'izany.
Fifandrafiana eo amin'ireo mpankafy baolina kitra
Al-Faisaly dia iray amin'ireo ekipa fanta-daza ao amin'ny ligin'ny baolina kitra Jordaniana ary nanjary saimbôlin'ny Jordaniana ho an'ny olom-pirenena Jordaniana.
Malaza ihany koa ary mariky ny harena Palestiniana ho an'ny olom-pirenena Jordaniana i Al-Wehdat, nomena ny anaran'ny toby fialokalofana Palestiniana faharoa lehibe indrindra any atsimo atsinanan'i Amman.
Raha mifamaly matetika ireo mpankafy baolina kitra na iza na iza ekipa, dia zatra miaraka kosa ny Jordaniana avy amin'ny andaniny sy ny ankilany miaraka rehefa misy ny lalao eo amin'ny ekipa roa tonta voalaza etsy ambony.
Mateti-pitranga ny raharaha fifamaliana, ary efa nitranga mihitsy aza ny hoe mpankafy baolina kitra 250 no naratra. Matetika misy mandoro ny fivarotana sy ny fiaran'ireo mpandalo noho ny antony tsy mazava afa-tsy ny herisetra.
Matetika miditra an-tsehatra ny polisy, ary matetika miezaka manitsy ny mpankafy azy ireo amin'ny alalan'ny fandraràna izay olona miezaka manomboka ady eo amin'ireo roa tonta – ny mpitantana ny klioba roa tonta – zavatra izay tsy mitranga raha tsy efa mifanandrina ny ekipa roa tonta.
Tamin'ny taona 2009, nilaza ny telegrama diplaomatika Amerikana tafaporitsaka fa:
Nitarika ny fanafoanana lalao baolina kitra tamin'ny 17 Jolay nifanaovan'i Faisali sy Wahdat, izay matetika mampiseho ny vondrom-piarahamonina avy amin'ny Morondrano Andrefana (Cijordaniana) ny iray ary Palestiniana ny iray, ny fihetsika feno herisetra Anti-Palestiniana sy ny teny filamatra manambany ny fiaviana Palestiniana an'ny Mpanjakavavy sy ny Printsy Mpandova Fanjakana.
Ny fehin-kevitra azo tsoahina dia tsy vitany hoe tafahoatra noho ny baolina kitra ny korontana, ny fandoroana sy ny fitondrantena ratsy, fa mampiseho ny momba ny ekipa ihany koa: foko (fiaviana). Nasongadin'ny Palestiniana filohan'ny ekipan'i Al Wehdat izany teboka izany, izay nilaza tamin'ny iray tamin'ny tafatafa tamin'ny World Soccer fa:
Ho an'i Wehdat, ny 99 isan-jaton'ny mpankafy baolina kitra dia Palestiniana, tsy hahita Jordaniana mpanohana Wehdat izany ianao.